Mateu 26 - Bhaibheri Dzvene [Shona Bible 2009]
&nbspJesu wakati apedza mashoko iwayo ose, akati kuvadzidzi vake:
&nbspMunoziva kuti kana mazuva maviri apfuvura ichava paseka, Mwanakomana womunhu uchakumikidzwa \_add kuvatongi\_add* kuti aroverwe.
&nbspZvino kwakavungana vaprista vakuru navanyori navakuru vavanhu muruvazhe rwomuprista mukuru wainzi Kayafasi.
&nbspVakarangana kuti vabate Jesu namano, vago\_add mu\_add*vuraya.
&nbspAsi vakati: Kwete pamutambo, kuti kurege kuva nebope pakati pavanhu.
&nbspZvino Jesu wakati ari paBhetaniya mumba maSimoni wamaperembudzi,
&nbspKwakavuya kwaari mukadzi nechinu chearibhasiteri chechizoro chinokosha zvikuru, akadurura mumusoro wake agere pakudya.
&nbspAsi vadzidzi vake vakati vachivona, vakatsamwa kwazvo vakati: kurasikirwa kwakadaro kwaitirweiko?
&nbspNokuti chizoro ichi chingadai chatengeswa nemari zhinji, ikapiwa varombo.
&nbspAsi Jesu aziva akati kwavari: Munotambudzireko mukadzi? Nokuti waita basa rakanaka kwandiri;
&nbspnokuti varombo munavo nguva dzose, asi ini hamuneni nguva dzose.
&nbspNokuti pakundidira chizoro ichi pamuviri wangu, waitira kuvigwa kwangu.
&nbspZvirokwazvo ndinoti kwamuri: Kose kunozoparidzirwa evhangeri iyi panyika dzose izvivo zvaitwa nomukadzi zvicharehwa, chive chirangaridzo chake.
&nbspZvino mumwe wavanegumi navaviri, wainzi Judhasi Isikariyoti, wakaenda kuvaprista vakuru,
&nbspakati: Muchandipeiko, ndigomuisa kwamuri? Vakatenderana naye pamasirivheri anamakumi matatu,*
&nbspZvino kubva ipapo akatsvaka nguva yakafanira yokumukumikidza kwavari nayo.
&nbspNe\_add zuva\_add* rokutanga rezvingwa zvisina mbiriso, vadzidzi vakavuya kuna Jesu vakati kwaari: Munoda kupiko kwatingakugadzirirai pasika kuti mudye?
&nbspAkati: Endai muguta kuna nyakuti, muti kwaari: Mudzidzisi unoti: Nguva yangu yava pedo; ndichaita paseka paimba yako navadzidzi vangu.
&nbspVadzidzi vakaita sezvavakarairwa naJesu; vakagadzira paseka.
&nbspZvino ava madekwana akagara pasi navanegumi navaviri.
&nbspVakati vachidya akati: Zvirokwazvo ndinoti kwamuri: Mumwe wenyu uchanditengesa.
&nbspZvino vakashungurudzika kwazvo, vakatanga mumwe nomumwe kuti kwaari: Ishe ndini here?
&nbspAsi wakapindura akati: Unoisa ruvoko neni mundiro ndiye uchanditengesa.
&nbspMwanakomana womunhu uchaenda hake sezvazvakanyorwa pamusoro pake; asi unenhamo munhu uyo Mwanakomana womunhu waanotengeswa naye. Zvaiva nani kumunhu uyu kana asina kuberekwa.
&nbspZvino Judhasi uyo wakamutengesa akapindura akati: Mudzidzisi, ndini here? Akati kwaari: Wataura iwe.
&nbspZvino vakati vachidya, Jesu akatora chingwa akaropafadza, akamedura ndokupa vadzidzi achiti: Torai, idyai uyu ndiwo muviri wangu.
&nbspAkatora mukombe, akavonga, akavapa achiti: Imwai mose pauri.
&nbspNokuti uyu iropa rangu resungano itsva, rinoteurirwa vazhinji rokukangamwirwa kwezvivi.
&nbspAsi ndinoti kwamuri: Handichatongomwizve zvechibereko chomuzambiringa, kusvikira zuva iro randichazomwa naro nemwi zvava zvitsva muushe hwaBaba vangu.
&nbspZvino vakati vaimba rwiyo vakabuda vakaenda kugomo reMiorivhi.
&nbspZvino Jesu wakati kwavari: Imwi mose muchagumburwa nokuda kwangu vusiku hwuno; Nokuti kwakanyorwa \_add kuchinzi\_add*: Ndicharova mufudzi namakwai eboka achapararira.
&nbspAsi shure kokumutswa kwangu, ndichakutungamirirai Gariri.
&nbspAsi Petro wakapindura akati kwaari: Kunyange vose vakagumburwa; nokuda kwenyu, ini handingatongogumburwi.
&nbspJesu akati kwaari: Zvirokwazvo ndinoti kwauri: Kuti vusiku hwuno, jongwe risati rarira, uchandiramba katatu.
&nbspPetro akati kwaari: Kunyange ndichifanira kufa nemwi, handingatongokurambiyi ini. Vadzidzi vose vakadarovo.
&nbspZvino Jesu wakasvika navo panzvimbo inonzi Getsemani, akati kuvadzidzi: Garai pano ini ndichienda kunonyengetera uko.
&nbspAkatora Petro navanakomana vaviri vaZebhedhi, akatanga kushungurudzika nokuzarirwa.
&nbspAkati kwavari: Mweya wangu unoshungurudzika kwazvo kunyange kusvikira pakufa, garai pano murinde neni.
&nbspAkapfuvura mberi zvishomanene, akawa nechiso chake, akanyengetera achiti: Haiwa Baba vangu, kana zvichibvira, mukombe uyu ngaupfuvure kwandiri. Asi kwete sokuda kwangu asi kwenyu.
&nbspAkaenda kuvadzidzi, akavawana vavete, akati kunaPetro: Saka makoniwa kurinda neni awa rimwe here?
&nbspRindai munyengetere, kuti murege kupinda mukuidzwa, mweya unoda zvirokwazvo asi nyama hainesimba.
&nbspAkaendazve rwechipiri akanyengetera, achiti: Haiwa Baba vangu kana mukombe uyu usingagoni kupfuvura kubva kwandiri, ndisina kuumwa, kuda kwenyu ngakuitwe.
&nbspAkadzoka, akavawana vavatazve, nokuti meso avo akanga orema.
&nbspAkavasiya, akaendazve akanyengetera rwechitatu, achitaurazve mashoko, iwawo.
&nbspZvino akavuya kuvadzidzi akati kwavari: Chivatai henyu muzorore; tarirai, nguva yaswedera, Mwanakomana womunhu wotengeswa mumavoko avatadzi.
&nbspSimukai, ngatiende, tarirai, wonditengesa kwavari wava pedo.
&nbspZvino achataura, tarira, Judhasi mumwe wavanegumi navaviri akasvika, ane chaunga chikuru vakabata minondo netsvimbo vachibva kuvaprista vakuru navakuru vavanhu.
&nbspZvino iye wakamutengesa wakavapa chiratidzo achiti: Uyo wandichasveta ndiye, mumubate.
&nbspPakarepo akasvika kuna Jesu, akati: Hekanhi Mudzidzisi! Akamusveta.
&nbspJesu akati kwaari: Shamwari, wavingeiko?. Ipapo vakavuya vakaisa mavoko pana Jesu vakamubata.
&nbspZvino tarirai, mumwe wavaiva naJesu akatambanudza ruvoko, akavhomora munondo wake akatema muranda womuprista mukuru, akagura nzeve yake.
&nbspZvino Jesu akati kwaari: Dzosera munondo wako munzvimbo mawo nokuti vose vanobata munondo vanoparadzwa nomunondo.
&nbspUnofunga here kuti handigoni kukumbira kuna Baba vangu vakandipa ikozvino mapoka avarwi anopfuvura makumi maviri?
&nbspZvino magwaro angazadziswa seiko anoti: Zvinofanira kuti zvidaro?
&nbspNenguva iyo Jesu akati kuchaunga: Mabuda semunovinga gororo neminondo netsvimbo kuzondibata here? Ndaigara nemwi mazuva ose ndichidzidzisa mutembere mukasandibata.
&nbspAsi izvi zvose zvaitwa, kuti magwaro avaporofita azadziswe. Zvino vadzidzi vose vakamusiya, vakatiza.
&nbspAvo vakanga vabata Jesu vaka\_add mu\_add*endesa kunaKayafasi muprista mukuru, apo pakanga pavungana vanyori navakuru.
&nbspAsi Petro akamutevera ari kure kusvikira pamuzinda womuprista mukuru, akapinda mukati, akagara navaranda kuzovona kupera kwazvo.
&nbspZvino vaprista vakuru navakuru namakurukota ose vakatsvaka vuchapupu hwenhema kuti vapomere Jesu, vamuvuraye.
&nbspAsi havana ku\_add vu\_add*wana, kunyange zvapupu zvizhinji zvenhema zvakavuya. Pakupedzisira zviviri zvakasvika,
&nbspzvikati: Munhu uyu wakati: Ndinogona kuputsa tembere yaMwari, nokuivakazve namazuva matatu.
&nbspZvino muprista mukuru akasimuka akati kwaari: Haupinduri chinhu here? Vuchapupu hwei hwunopupurirwa iwe?
&nbspAsi Jesu wakaramba anyerere. Muprista mukuru akapindura akati kwaari: Ndinokupikisa naMwari mupenyu kuti utivudze kana uri Kristu, Mwanakomana waMwari.
&nbspJesu akati kwaari: Wataura iwe; asi ndinoti kwamuri: Kubva zvino muchavona Mwanakomana womunhu agere kuruoko rworudyi rwesimba, achivuya pamusoro pamakore okudenga.
&nbspIpapo muprista mukuru akabvarura nguvo dzake akati: Wamhura Mwari; tichadireiko hwumwe vuchapupu? Tarirai, manzwa zvino kumhura Mwari kwake.
&nbspMunofungeiko? Vakapindura vakati: Unemhoswa yorufu.
&nbspZvino vakamupfira mate pachiso, vakamurova netsiva, vamwe vakamurova nembama,
&nbspvachiti: Porofita kwatiri, iwe Kristu, ndiani wakurova.
&nbspPetro wakanga agere panze pamuzinda. Zvino murandakadzi wakavuya kwaari akati: Newevo wakanga una Jesu weGariri.
&nbspAsi iye wakaramba pamberi pavose achiti: Handizivi zvaunoreva.
&nbspZvino wakati abuda pasuvo, mumwe akamuvona, akati kuna vaivapo: Uyu wakanga anaJesu weNazareta.
&nbspAkarambazve nokupika, \_add achiti\_add*: Handimuzivi munhu uyu.
&nbspChava chinguva vakanga vamirepo vakavuya vakaswedera vachiti kunaPetro: Zvirokwazvo newevo uri wavo nokuti kutaura kwako kunokutengesa.
&nbspZvino wakatanga kutuka nokupika \_add achiti\_add*: Handimuzivi munhu uyu. Pakarepo jongwe rikarira.
&nbspIpapo Petro akarangarira shoko raJesu raakati kwaari: Jongwe risati rarira, uchandiramba katatu, Ipapo akabuda panze akandochema zvikuru.